Tenin'i Randriamahazomanana Jacquis noho ny fanokanana ny rihana – FJKM Ambavahadimitafo Tenin'i Randriamahazomanana Jacquis noho ny fanokanana ny rihana |
Tenin'i Randriamahazomanana Jacquis noho ny fanokanana ny rihana
Publié le 27 mai 2009 à 12:05
« Mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay ; ary sahan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo »
Isaorana anie Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina noho ny nahazoan’ny fiangonana Ambavahadimitafo folo taona, niarahany niasa tamin’ny Raiamandreny Mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo mivady sy ny zanany (1996-2006)
Ho fanamarihana izany, dia efa notanterahan’Andriamanitra ny asa fananganana ny rihana sy ny fanavaozana ny trano fiangonana manontolo.
Nohon’ny fitiavan’Andriamanitra antsika mpanompony eto amin’ny fiangonana Ambavahadimitafo, dia nomeny ny andro lehibe anio isika, hitokanana ny ASA fanitarana sy fanavaozana ny Tempoly Masina.
Koa fifaliana lehibe ho ahy ny miarahaba antsika mianakavy, ary manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana ny Raimanadreny Mpitandrina noho izao taom-pahasoavana izao, ary mirary soa sy fahasalamana ho azy hatrany mba homen’ny Tompo andro lava izy, hanohizany izay mbola tsy vita.
– Ny fiangonana manontolo tsy misy ankanavaka izay tomponkevitra, ary nitondra ny entimanana rehetra hanatanterahana ny asa.
– Ny biraom-piangonana, ny Komity faha 10 taona, izay tsy nikely soroka hatrany na dia teo aza ny fahasahiranana samihafa
– Ny teknisiana sy ny orinasa mpanatanteraka, ny sampana rehetra, ny fikambanana, ny fianakaviana sy ireo zanaka am-pielezana, nanohana ara-bola sy ara-pitaovana.
– Izany rehetra izany anefa dia tsy avy amintsika fa noho ny fitantanan’Andriamanitra mahagaga ataony ho azy.
Jereo eto ny sary
Asabotsy 23 may 2009
Filohan’ny Komity faha 10 taona
« Fa ampifalianao amin’ny nataonao aho Jehovah ô ;
Ny asan’ny tananao no hihobiako
Jehovah ô, akory ny halehiben’ny asanao » Salamo 92 : 4 – 5